Teori Pärm 5
Waxaad waddaa gaadhi ku xidhanyahay buudhi. Maxay keeni kartaa inuu hooseeyo culayska buudhigu u gudbinayo birta isku xidhaysa gaariga iyo buudhiga?
Gaadhiga laydhkiisa haafka ah ayaa dadka cawari kara
Gaadhiga waditaankiisa ayaa sii aad ah u xumaan karta
Gaadhiga taayiradiisa dambe ayaa horay u dhamaada
Waxaad ku xiriirinaysaa buudhi gaadhi shakhsiyeedkaaga, laakiin waxaadan hubin in la oggolyahay iyo in kale. Xaggee ka helaysaa warbixinta aad u baahantahay si aad u koontrooshid?
Warbixintii ugu dambaysay ee kasoo baxday waaxda kaantroosha gaariga (besiktningsprotokoll)
Gaariga buugiisa yar ee sheegaya sida uu shaqaynayo (instruktionsbok)
Birta wax lagu jiido (dragbalken)
gaadhiga warqadiisa caddaynta diiwaangelinta (registreringsbevis)
Ma la oggolyahay marnaba inaad meel waxyar ka horraysa isgoys ka dhaaftid ama ka baastid gaari kale dhinaca midig?
Maya, lama oggola marnaba inaan ka dhaafo dhinaca midig
Maya, lama oggola marnaba inaan ku dhaafo gaari kale meel ku dhaw isgoys
Haa, markuu darawalka gaariga iga horeeya uu tusiyo calaamad ah inuu u leexanayo dhinaca bidix
Gaarigaaga waxaad ku baakintay dhaadhac ama daadag aad u foorara oo ku dhaw marshabiyeediga geeskiisa. Muxuu yahay waxa dheeraadka ah aad samayn kartid si uusan gaarigu u dilindiloon ama u wiilanwilan?
Waxaan ku hubsanayaa in ugu yaraan hal taayir saaran yahay marshabiyeediga
Waxaan ka leexinaya taayirada xagga marshabiyeediga
Waxaan ku leexinaya taayirada xagga marshabiyeediga
Daliigtee ama xariiqdee raacaysaa xaaladaan?
Waxaan kala dooran karaa inaan raaco mida cad ama mida jaallaha/huruuda ah
Mida Jaalle ama huruuda ah
Ma adigaa mudan inaad istaagtid mise gaariga kaa hor imaanaya haddii aysan meeshu idin ku filnayn inaad isku dhaaftaan?
Aniga ayay tahay inaan istaago waddada dhinaceeda bidix, maadaama anigu aan kusoo hormaray
Aniga ayay tahay inaan istaago waddada dhinaceeda midig, maadaama anigu aan kusoo hormaray
Gaariga iga hor imaanaya, maadaama dhinaciisa ay calaamadu ku taallo
Markaad koontroolaysid biriiga waxaa xoog loogu joogsadaa badeelka biriigga. Muxuu hadaba samaynayaa badeelku haddii biriigu shaqaynayo?
wuxuu joogsan doonaa kalabadhka oo u siin iska caabin aamusan
Wuxuu u dagayaa si tartiib ah
waa joogsan doonaa meesha ugu hooseysa
wuxuu joogsan doonaa kala badhka oo laga dareemayo moolo-moolo
Sidee ayay tahay inaad u wadid si uu waditaanku u noqdo sidii bay'adda u fiican ee suurtogalka ah marka aad ku wadaysid waddo baadiye
Waxaan ku wadayaa geer hooseeya oo iska ilaalinayaa istaag aan loo baahnayn
Waxaan ku wadayaa xawaare joogto ah oo geerka hooseeyo
Waxaan ku wadayaa xawaare joogto ah oo iska ilaaalinayaa joojinta aan loo baahnayn
Waxaan ku wadayaa karaar-qaadasho degdeg ah iyo sheelare dhamaystiran
Waa meeqa saamiga wadayaasha labka ama ragga ah ee ku dhinta wadooyinka taraafiga?
Qiyaastii 25 boqolkiiba
Qiyaastii 95 boqolkiiba
Qiyaastii 50 boqolkiiba
Qiyaastii 75 boqolkiiba
Waxaad ku timid goob shil ka dhacay. Qof ayaa si xoog leh uga dhiigbaxaya dhaawac gacanta uga yaal. Maxy tahay inaad isku daydid inaad samaysid?
U jiifi qofka si deggan oo xasiloon oo dhinac dhinac ah (framstupa sidoläge)
Jiifi qofka oo gaagacanta meel hoose dhig
Saar buste qofka dhaawacmay
Cadaadi dhaawaca oo ku duub faashad
Midkee ah xawaaraha ugu sareeya ee la oggolyahay oo khuseeya gaadiidkan ugu sokeeya ee kaa horeeya?
Waxaad ku xiraysaa gaari shakhsiyeedkaaga taayirada barafka ee masaamiirta leh. Labo taayir waa cusayb, labada kalena waxaad isticmaashay dhawr kal ama xilli oo hore. Xaggee ayay tahay inaad ku xirtid taayirada ugu fiican ee cusub si loo yareeyo khatarta siibashada.
Garabka dambe haduu baabuurku yahay nooca lugaha hore ka dhaqaaqa, iyo garabka hore hadduu yahay gaarigu nooca lugaha dambe ka dhaqaaqa
Garabka hore oo dhammaan noocyada baabuurta
Garabka hore haduu baabuurku yahay nooca lugaha hore ka dhaqaaqa, iyo garabka dambe hadduu yahay gaarigu nooca lugaha dambe ka dhaqaaqa
Garabka dambe oo dhammaan noocyada baabuurta
Waxaad ku timid isgoys ay calaamadan wadadu suran tahay. Maxay sheegaysaa calaamadaan wadadu?
Waddada dhinaca midigi waa waddo si gaar ah loo leeyahay (privat)
Waddada dhinaca midigi waa waddo si gaar ah loo leeyahay (enskild)
Jiho ku meel gaar ah oo baabuurta loo leexinayo
Waa inaan u leexdaa midig
Sidee ugu fiican oo aad u yarayn kartaa saamaynta xun ee bay'ada?
Waxaan iska ilaallinayaa inaan adeegsado saliidda matoorka ee artifishaalka ah
Waxaan qaadanayaa baaskiilka marka aan meelaha dhaw aadayo
Waxaan adeegsanayaa matoor-kululeeyaha sannadka oo dhan
Waxaan gaariga isticmaalyaa marka aan meel dhaw aadayo oo kaliya
Ma lagaaga baahan yahay xaaladahaan mid kamid ah inaad siisid baska fursad uu uga dhaqaaqo maxaddada ama boosteejada
Haa, xaaladda A oo kaliya
Haa, xaaladda B oo kaliya